Commonwealth Sends Observers to Zimbabwe - allAfrica.com
The Commonwealth Parliamentary Association has raised concerns with President Emmerson Mnangagwa about current election processes that might result in a flawed election. A Commonwealth assessment mission has arrived in Zimbabwe as Harare starts the first step out of the four required stages for the country to be re-admitted into the group.
Zimbabwe: Commonwealth Crew Confronts Mnangagwa Over Poll Reforms
New Zimbabwe, 5 June 2018
The Commonwealth Parliamentary Association (UK) has raised concerns with President Emmerson Mnangagwa about current election processes that might result in a flawed election. Read more »
Zimbabwe's opposition MDC Alliance have staged a demonstration to press the Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) to implement more reforms ahead of the July 30 general elections. see more »
President Emmerson Mnangagwa has officially applied for Zimbabwe to rejoin the Commonwealth and has invited observers to the Read more »
Zimbabwe: Commonwealth Poll Observers Arrive in Harare
A Commonwealth Assessment Mission jetted into Zimbabwe Monday as Harare starts the first step out of the four required stages for the country to be re-admitted into the group. Read more »
Foreign Affairs and International Trade Minister Sibusiso Busi Moyo (right) speaks to Yvonne Apea Mensah , Head of Africa, Governance and Peace Directorate and Linford Andrews, Political Advisor (Electoral Support), Governance and Peace Directorate at his Munhumutapa Offices in Harare.